backlit Billboard ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက် China IP65 Curtain LED Strip Light - DiGuang
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > LED မီး Box ကိုအလင်းရောင် > နောက်ခံအလင်းရောင် > Backlit Billboard အတွက် IP65 ကုလားကာ LED မီးခွက်
backlit Billboard အတွက် IP65 ကုလားကာ LED မီးချောင်းအလင်း
Backlit Billboard အတွက် IP65 Curtain LED Strip Light သည် CE RoHS နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်မှုဖြစ်ပြီး ၂ နှစ်အာမခံပါသည်။ ၎င်းသည်အလင်းသေတ္တာအလင်းအတွက်အကောင်းဆုံးစွမ်းအင်ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ ဤနောက်ကျောမီးအလင်းရောင်သည်မြင့်မားသော lumen output ရှိပြီးအလင်းပိုမိုညီမျှသောဖြန့်ဖြူးရန်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောထောင့် (175 ° PMMA Lens) ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥရောပနှင့်အမေရိကရှိစျေးကွက်အများစုကိုလွှမ်းခြုံနိုင်စေရန်နှစ်ပေါင်းများစွာ light box light ကိုကြော်ငြာခြင်း၌အားစိုက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တရုတ်နိုင်ငံတွင်သင်၏ရေရှည်မိတ်ဖက်ဖြစ်လာရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
IP65 ကုလားကာ Backlight Billboard အတွက် LED အလင်းဖြာပါ
1000 က x 17 x ကို 1.0
အပူချိန်မြင့်မားသော SMD 2835/3030/3535 LEDs ၁ ။
2. နောက်ကျော -lit အလင်းရောင် module တစ်ခု, 175 ဒီဂရီမြင့်မားတဲ့င့်လင်းမြင်သာ optical မှန်ဘီလူး;
Backlit Billboard အတွက်ရေအိုင်၊ IP65 ကုလားကာ LED Strip Light၊ ရေစိုခံနိုင်မှု၊ ဖုန်မှုန့်နှင့်သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
၇။ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောလိုဂို၊ ဝါယာကြိုးအရှည်၊ LED ချစ်ပ်များ၊ အရောင်အပူချိန်စသည်တို့ကိုထောက်ပံ့ပါ။
1. 4-20cm အထူကြော်ငြာထည်အလင်း box ကို
၂။ အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပကြော်ငြာသေတ္တာအတွက်နောက်ခံ LED မီးအရင်းအမြစ်
3. မမှန်ပုံသဏ္lightာန်အလင်းအတွက်အလင်း box ကိုပျံ့နှံ့အလင်းရောင်အရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်
၄။ စျေးဝယ်စင်တာများ၊ မြေအောက်ရထားများ၊ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များနှင့်တစ်ဖက်တည်းအလင်းရောင်ရှိသည့်အခြားနေရာများ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူပြင်းတဲ့ထုတ်ကုန်များအတွက်, ငါတို့စတော့ရှယ်ယာရှိသည်။ အခြားထုတ်ကုန်များသည် ၇ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိကြာသည်။
၄။ LOGO ကိုအလင်းသို့မဟုတ်အထုပ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်နိုင်ပါသလား။
ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏စာလုံးရေစာသို့မဟုတ် light box အရွယ်အစားကိုအကြံပေးပါ။ ၂၄ နာရီအတွင်းသင့်အားလင်းနေသည့်ဆိုင်းဘုတ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ကိုပေးလိမ့်မည်။
hot Tags:: ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ လျှော့စျေး၊ စျေးနှုန်း၊ အရည်အသွေး၊